Wasaarada Waxbarashada Oo Ka Jawaabtay Cabashadii Macalimiinta Ka Timid. – STAR FM SOMALIA
Iyada oo Maalmihii la soo dhaafay ay mushaar la’aan ka cabanayeen, isla markaana ay sheegayeen inay xaquuqdooda maqan tahay macalimiintii ka qeyb qaatay Imtixaanka dowladda ayaa waxaa warkaas ka jawabtay Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya.
Qoraal kooban oo kasoo baxay Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa marka hore waxaa loogu mahad celiyay macallimiinta had iyo jeer u taagan tayeenta waxbarashada ubadka soomaaliyeed gaar ahaan dajinta, ilaalinta iyo saxida imtixaanka qaranka ee sanad kasto ay qaado Wasaaradda Waxbarashada.
Sidoo kale Wasaaradda ayaa sheegtay in ay dadaal dheer ugu jiraan helida xaquuqda macalimiinta iyo kuwii saxay Imtixaanka, isla markaana ay uga maqan tahay dhinaca Wasaaradda Maalliyadda.
Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha & Tacliinta Sare, waxay dadaal dheer ugu jirtaa sidii xuquuqdooda ay u heli lahaayeen macalimiinta u dhabar adeegay ka qeyb-qaadashada imtixaanka qaranka waxayna jawaab ka sugeysaa dhigeeda Wasaaradda Maaliyadda annagoo rajeyneyna in dhawaan aad heli doontaan xaquuqdiina ku aadan saxida iyo ilaalinta imtixaanka qaranka ayaa lagu iri” Qoraalka Wasaaradda Waxbarashada.
Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya aya snad kasta qaada Imtixaanka Shahaadiga ee Dugsiyada Sare, waxaana mararka qaar cabasho dhanka mushaar la’aanta ah keena Macalimiintii ka qeyb qaatay saxida iyo ilaalinta imtixaanka.